mitirka biyaha ultrasonic akhriska tooska ah waxaa loo isticmaalaa cabbiraadda, kaydinta iyo muujinta socodka biyaha.
Dhexroor Magaca: DN15~DN40
Kala duwanaanshaha codsiga: Nidaamka shabakada tuubada-biyaha
Taxanaha Biyaha Ultrasonic Mitirka Biyaha
1. Qayb dhaqaaqin ma jirto, tilmaanta socodka ugu yar.Saxnimada waarta.
2. Double channels ultrasonic transit-time sensor for saxnaanta sare iyo hawlgalka lagu kalsoonaan karo.
3. Wuxuu cabbiri karaa oo kaydin karaa socodka hore iyo dib-u-socodka labadaba.
4. Diidashada firfircoon, xatooyada, socodka dib u socodka, mitirka waxyeelada/wax-ka-qabsiga, heerka socodka, iyo tilmaanta nolosha batteriga
5. In ka badan 15 sano nolosha shelf.
6. IP 68 design, muddo dheer ka hoos shaqayn biyaha.
7. Wax soo saarka caadiga ah waa RS485, Lora, NB-IoT, 4-20mA, Pulse, GPRS waxay noqon kartaa ikhtiyaari.
Dhexroor Magaca: DN50~DN300.